जुत्ता सिलाउने नथुनियाको हातबाट जुस पिउदै डा. केसीले अनशन तोडे ( पुरा विवरण सहित हेर्नुहोस) – पुरा पढ्नुहोस्……
जुत्ता सिलाउने नथुनियाको हातबाट जुस पिउदै डा. केसीले अनशन तोडे ( पुरा विवरण सहित हेर्नुहोस)
काठमाडौं, पुस २९ – डा. गोविन्द केसीले १४ औँ पटकको अनशन तोड्नुभएको छ । शिक्षण अस्पतालको गेटमा जुत्ता सिलाउने नथुनिया मोतीको हातबाट जुस पिएर डा. केसीले अनशन तोड्नुभएको हो । शुक्रबार बेलुका स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहोरा नेतृत्वको टोलीसँग ५ बुँदे सहमति गरेर डा. केसी अनशन तोड्न सहमत हुनुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमको डिनमा शशी शर्मालाई पुनर्वहाली गर्ने फैसला गरेपछि डा. केसी प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै गएको सोमबारदेखि अनशन बस्नुभएको थियो । अनसन तोड्ने क्रममा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राजीनामा नदिए फेरि अनशन बस्ने बताउनुभयो ।
डा. केसी र सरकारबिच चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा ५ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन दफा २३ बमोजिमको सिफारिस समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएममा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई नै निरन्तरता दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, आइओएमको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यस अगाडि गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्रिविका कुलपतिले जटिसक्दो छिटो कदम चाल्ने लगायत पाँच बुँदे सहमति भएपछि डा. केसी अनशन तोड्न सहमत हुनुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग्दै अनशन थालेका डा. केसीले सरकारसँग गरेको सहमतिपत्रमा त्यसविषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन । उहाँका समर्थकले यो माग कायमै रहेको बताएका छन् ।
Posted in स्वास्थ्य/ जीबन शैली
Prevफोरजी नेटवर्क विस्तारमा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै टेलिकम ..
Nextहामी माओवादी पार्टीमा बस्दैनौ : महरा ! अचानक महराले यस्तो किन भने हेर्नुहोस्…
नेपाली युवाले औषधि बोक्ने ड्रोन बनायर उड्यो (भिडियो सहित)
साझपख आयो सिलवाल लाई खुसिको खबर…
गृहमन्त्री थापाको स्पीड तारिफ योग्य छ, बिकासमुखी जंगबहादुर र बिकासमुखी हिटलर नै बन्नु पर्छ – हेर्नुहोस् रविको सिधाकुरा
पहिलो पटक रबि लामिछाने र रमेश प्रसाईको भेट,रमेश प्रसाईले बुझाए रबिलाई यति धेरै रकम- सबैले हेर्नुहोस (भिडियो सहित) सक्दो सेयर गरौ।
जादुमय स्वर भएकी दूधवा,ली, सबैलाई चकित पारिन, दूधवाली भन्दा लाजले भुतु,क्कै (भि,डियो सहित)
बालिका बला,त्कार गर्ने बिरुद्ध मृ,त्यु द,ण्डको सजाय हुनेगरी कानून बनाउन कार्यदल गठन !
दशै आउनै लाग्दा खसी बोकाको नयाँ मूल्य निर्धारण : अब प्रतिकेजी ५ सय रुपैयाँमा !
आज बढ्यो डलर सहित यि बिदेशी मुद्राको भाउ